Yintoni i-corona kwaye ndingenza ntoni ngayo?
I-Coronavirus okanye i-corona yintsholongwane encinci (incinci kakhulu ukuba uyibone ngamehlo enyama) enokusasazeka kwaye ibangele ukugula ebantwini. I-Corona ibangela iimpawu ezinjengomkhuhlane ezifana nokukhohlela okomileyo, ukuqhawuka kokuphefumla, umkhuhlane kunye nokuqaqamba komzimba. I-Corona ichaphazela ikakhulu inkqubo yokuphefumla. Ngelixa uninzi losulelo lungenabungozi, lunokubangela inyumoniya (usulelo olunzulu kwimiphunga) kwaye lunokubulala kwiimeko ezinzima.
Nabani na unokufumana i-corona. Abantu abadala kunye nabantu esele benokugula, umzekelo, izifo zokuphefumla, umhlaza okanye isifo seswekile, basemngciphekweni omkhulu wokufumana iziphumo ezibi kakhulu.
I-Corona isasazeka ukusuka komnye umntu owosulelekileyo kwiidonki ezikhutshiweyo xa ziphefumla, zikhohlela, okanye zityhudisa ebantwini, ebusweni, okanye ekudleni. Ingena emzimbeni ngomlomo, ngeempumlo, nangamehlo. Xa sele emzimbeni, iqala ukwanda kwaye isasazeke kwezinye iindawo. I-Corona inokuhlala emzimbeni kangangeentsuku ezili-14 ngaphambi kokuba kubonakale ukuba kugula kugula. Ke abantu banokuba ne-corona kwaye bangayazi, kwaye badlulisele intsholongwane kwabanye.
Okwangoku akukho chiza okanye amayeza athile e-corona. I-Corona ayibulawa ziintsholongwane okanye amayeza ekhaya. I-Corona inokuthintelwa kuphela ngokuphepha ukunxibelelana nayo kunye nokuhlamba izandla rhoqo.
Ukuthintela ukosuleleka, hlamba izandla zakho ngesepha namanzi. Yenza njalo, nokuba izandla zakho azibonakali zingcolile. Hlamba ngamandla phantsi kwemijikelezo yamanzi kangangemizuzwana engama-20 ngesepha, uqiniseke ukuba ukrola phantsi kwezandla zeminwe kwaye ugubungele lonke isandla kunye nesandla. Ukuhlamba izandla zakho ngesepha namanzi kubulala iintsholongwane ezinokuba sezandleni zakho. Hlala uhlambe izandla ngaphambi, ngexesha nasemva kokuba ulungiselele ukutya, emva kokusebenzisa indlu yangasese, ngaphambi kokutya, xa ukhathalela abagulayo, emva kokuphatha izilwanyana okanye inkunkuma yezilwanyana, nasemva kokukhohlela, ukuntywila, okanye ukubetha kwempumlo yakho.
Kunqande ukuchukumisa amehlo, impumlo kunye nomlomo ngaphandle kokuhlamba izandla kuqala. Izandla zichukumisa imiphezulu emininzi kwaye zinokufumana iintsholongwane. Xa sele kungcolisiwe, izandla zinokuyihambisa le ntsholongwane emehlweni akho, impumlo okanye umlomo. Ukusuka apho, intsholongwane inokungena emzimbeni wakho kwaye inokugula.
Kubaluleke kakhulu ukunqanda ukunxibelelana ngokusondeleyo naye nabani na onomkhuhlane kunye nokukhohlela okanye ezinye iimpawu zokuphefumla. Xa ukhohlela okanye ukuntywila, soloko uwugquma umlomo wakho kunye neempumlo ngeqobelo lakho eliguquliweyo okanye ngesicubu. Emva koko lahla izicubu ezisetyenzisiweyo ngokukhawuleza. Sukucheba esidlangalaleni.
Gcina umgama oziimitha ezi-1 ubuncinci phakathi kwakho naye nabani na okhophayo okanye ukuthunga. Kulumkele ukunxibelelana naye nabani na onomkhuhlane kunye nokukhohlela.
Ukuba ufuna ukunyamekela umntu onomkhuhlane, ukukhohlela kunye nokuphefumla okunzima, ungalibali ukunxiba imask ekhuselayo okanye imaski yelaphu kwaye ngakumbi, ukuziqhelanisa nococeko lwezandla.
Ukuthintela i-corona, kukhuselekile ukunqanda ukunxibelelana ngokwasemzimbeni kwabanye. I-Corona kunye nezinye iintsholongwane zinokudluliswa ngokuxhawula izandla kwaye kamva ukuchukumisa amehlo, impumlo kunye nomlomo. Ke xa udibana nabanye, musa ukubabulisa ngokuxhawula izandla, ukugona okanye ukwanga. Bulisa abantu ngamaza, ngentloko okanye ngesaphetha endaweni yoko. Ukuba ucinga ukuba kukho ikhona kwindawo yakho, hlala ekhaya ukunqanda ukunxibelelana nabanye.
Hlala ekhaya ukuba uqala ukungziva ungonwabanga, nokuba uneempawu ezinobuthathaka obunje ngeentloko zentloko kunye neempumlo ezincinci zokuhamba, de ube upholile. Ukuba uyathula, ube ukhohlela okomileyo, ubunzima bokuphefumla kunye nomkhuhlane, funa uncedo kugqirha kwangoko njengoko oku kunokwenzeka ngenxa yosulelo lokuphefumla okanye enye imeko enobuzaza.
Iinkolelo zobuxoki kunye namahemuhemu malunga ne-corona anokuba yingozi kakhulu kwaye ade abulale abantu. Umzekelo, ukusela izinto ezifana ne-bichi okanye utywala kuya kukwenzakalisa endaweni yokuthintela i-corona. Nokuba ulwazi olufumana kubahlobo okanye izalamane ezisondeleyo lunokuba lolungachanekanga okanye lube yingozi. Landela kuphela icebiso elichanekileyo lezempilo loluntu kwigunya lezempilo lendawo yakho.
Unganceda ukulwa corona ngokusasaza lo myalezo. Nceda wabelane nabahlobo bakho kunye nosapho, ukhetha ukusebenzisa imiyalezo enje ngeWhatsApp.
Lo mxholo unikezwe yi-Audiopedia, iprojekthi yehlabathi ukwenza ulwazi lwempilo luvunyelwe. Funda ngakumbi kwi www.audiopedia.org